Xaflad lagu soo dhawaynayey dawlada cusub ee Soomaaliya iyo dareenka jaaliyada Soomaaliyeed ee Århys, Denmark.
Waxaa taariikhdu markay ahayd 19.10.2004 lagu qabtay magaalada Århus caasimada labaad ee Denmark shir ballaadhan oo Jaaliyada Soomaaliyeed ku muujisay taageerada iyo dareenkooda ku wajahan dawladda cusub ee Soomaaliya.
Kulankaan oo ay ka hadleen dad badan wuxuu ahaa shirkii ku bilaabmay kuna dhamaaday si qiiro iyo dareen aad u fog xambaaran oo aan halkan lagu soo koobi karin. Dadka ka suulin dareenkaasi qof walbaana wuxuu gurigiisii iyadoo qof walba wejigiisu bedalan yahay oo aad moodidi in ay galeen hawl ay ku rafaadeen.
Dad badan oo hadal u kacay ayaa indhahooda waxaan ilmo ahayn laga waayey, wuxuu ahaa dareen dadkoo dhan wadaageen. Hooyo Cambaro oo u kacday inay hadal halkaa ka jeediso oohin iyo muraaradilaac waxaan ahayn laga waayey, kadibna makrafoonkii looga miciinay.
Xidhiidhiyaha kulankan Cadirashiid Sheikh ayaa ugu horayn ku soo dhawayey Cadisalaan Sheekh Maxamuud oo ka warramay marxaladihii Soomaaliya soo martay waqtigii gumaysiga, dagaalkii labaad ee aduunka, kala qaybintii dadka Soomaaliyeed iyo xorriyadiiba.
Dr. Maxamed Duacaale ayaa ka waramay xaalado badan oo dadka dareenkoda aad u kiciyey, isagoo yidhi qof Soomaalieed oo maanta aan dhibaataysanayn majiro, Dr. Maxamed wuxuu ku soo halqabsaday qoraanaga caanka ah ee Soomaaliyeed Nuuradiin Faarax iyo marxalado uu la ooyey, inagana innagama reebana dareenkaa, iyadoo aynu aragno dhibaatada dadkeenii iyo innagaba ina haysta.
Sheekh Cabilcasiis oo halkaa ka hadlay ayaa ka waramay Hijradii nabigeenna NNKH, wuxuu u hijrooday nabigeenu siduu u heli lahaa meel dawlad Islaam ah ay ka abuuranto oo lugaheeda isku taagto, halkaa waxaan ka qaadanaynaa buu yidhi inaan Diintu dawlad ka maarmi karin, dawladuna diin ka maarmi karin. Waxaa fiican in dadku fahmaan faa'iidada ay dawladu u leedahay...
Daahir Cabdalle Maxamed ayaa isaguna si aada uga hadlay dhibaatada soo waajahday ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha, khaasatan qoysas, isagoo khaasatan ka hadlaya Denmark wuxuu soo qaatay tusaalooyin.
Cadisalaan Sh. Maxamuud
Wuxuu si qiiro leh u yidhi dadka waa inaan utashanaa sidii aan dalkeenii ugu noqon lahayn, waxan u baahanahay dawlad dareenka dadka fahmaysa oo dalkii wax ka qabata.
Waxaa ka mid ahaa dadkii hadalada qiirada leh halkaa ka soo jeediyey Khaalid Maxamed Garaad Cali...
Ugu danbayn waxaa loogu mahad celiyey dhamaan dawladihii doorka wayn ka soo qaatay ka midho dhalinta shirkii labada sano socday oo lagu xusay in dadku mar ka rajo dhigeen iyo marxalada uu hadda soo gaadhay oo ah mid lagu diirsado.
Dahir C. Maxamed
Kullankan ayaa ahaa run ahaantii mid si dhab ah uga tarjumayey guud ahaan dareenka iyo dhibaatooinka ay tabanayaan qurba joogta Soomaaliyeed oo aan odhan karno waxaa soo wajahay dhibaato wayn dhinacyo badan leh, khaasatan qoysaska iyo dadka maatada ah aad ay dhibaatooyinku aad u saameeyeen, waan arrintaa ta kalliiftay in dad badan qarsan kari waayaan dareenkooda.
Hadaba waxa is waydiin mudan yey wax ka tabayaan dadka Soomaaliyeed ma qabiil, ma hogaan xumo ku habsatay mise qurbaha ayaa dhagar gaar ah ka galay?
Sua'aalahaa, jawaabtoodu waa kuwo u yaala dadka Soomaaliyeed, waxaana odhan karnaa waxay xal heli karaan marka ay jawaabo sax ah u helaan su'aalahaas.
Jaaliyada Soomaaliyeed ee Århus, Denmark
QORAALADII LAGA QORAY SAMSAM AXMED DUCAALE